ငါ့ကို SMPTE ပြပါ @smpteconnect | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » audio » ငါ့ကို SMPTE ပြရန်! @smpteconnect
ငါ့ကို SMPTE ပြရန်! @smpteconnect
ရိုင်ယန် Salazar, တည်ထောင်သူ
လက်ကမ်းချအဆိုကိုပုံရိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ဦးဆောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည် SMPTE (အဆိုပါ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က) ။ ခြောက်ဆယ်လေးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများရှိကမ္ဘာတစ်လွှားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူက (cameramen, အတိုင်ပင်ခံ, ဒီဇိုင်နာများ, အယ်ဒီတာများ, ဆရာ, ဆရာမများ, အင်ဂျင်နီယာများ, လယ်ပြင်သည်အသုံးပြုသူများ, ထုတ်လုပ်သူများ, နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာများနှင့်ပညာရှင်များအပါအဝင်) အဖွဲ့ဝင်များကရာချီရှိပါတယ်။ သငျသညျချုံ့, encryption ကို, သို့မဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကွန်ယက်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာနေလျှင်, SMPTE ပြပွဲဖြစ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
SMPTE Conferences က & ပြပွဲများအဆိုပါများမှာ PREMIER စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်မီဒီယာနှင့်နည်းပညာ၏ဖြစ်ရပ်များ။ ရွေ့လျားမှုပုံရိပ်, မီဒီယာနည်းပညာ, ထုတ်လုပ်ခြင်း, စစ်ဆင်ရေး, နှင့်တူသောဤအဆိုကိုရုပ်ပုံစတူဒီယို, ထုတ်လွှင့်ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက်များ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကမ္ဘာကျော်နည်းပညာအတွေး-ခေါင်းဆောင်များ, ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများ, အတူကွန်ယက်အားပြပွဲဖြစ်ပါသည် စနစ်များပေါင်းစည်း, ထုတ်လုပ်သူများ, display ကိုနည်းပညာများနှင့်ဖြန့်ဖြူးပေးသူ။
သေတ္တာထဲတွင်နှင့်ပြင်ပမှာနှစ်ဦးစလုံးတောက်ပတွေးခေါ်မှုနှင့်အတူ SMPTE စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဦးဆောင်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အကာအသိအမှတ်ပြုစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများ-setting ကိုကိုယ်ဖြစ်၏။ ဒါဟာရွေ့လျားမှုပုံရိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှနည်းပညာပညာရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။
တစ်ဦးမှာ SMPTE Show ကို, ဘာမှအဆိုကိုရုပ်ပုံစတူဒီယို, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကေဘယ်လ်ကွန်ယက်များ, ထုတ်လုပ်မှုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်း, ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများ, စနစ်များပေါင်းစည်း, ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်နည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအနေဖြင့်အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေဖို့အရေးကြီးတယ်ခွက်၏ထိုကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နိုငျသညျ, Display ရဲ့နည်းပညာများနှင့်ပင်ဖြန့်ဖြူးပေးသူ! သင်တစ်ဦးမှဖူးပြီးတာနဲ့ SMPTE Show ကို, သင်အမှန်တကယ်အခြားမည်သည့်ဖြစ်ရပ်များတက်ရောက်ရန်လိုအပ်သလဲ?
SMPTE Show ကိုရှုထောငျ့စတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါငျးတို့သ element တွေကိုဆံ့ - ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲ မှစ. , ရွေ့လျားပုံရိပ်၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် display ကိုရန်။ အဆိုပါနှစ်ပတ်လည်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုစက်မှုလုပ်ငန်းထိပ်တန်းသခင်တစ်ဦးက high-tech ပြပွဲခန်းမများနှင့်မတူညီသောကွန်ယက်နှင့်အတူမြင့်မား-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများ၏ရက်ပေါင်းများစွာကြွားကြည့်ရှုလော့တစ်ဦးမျက်မှောက်ဖြစ်ပါတယ် ... တစ်ဦးချင်းစီ SMPTE အဖြစ်အပျက်ခြွင်းချက်အခွင့်အလမ်းပါ! သင်တို့မူကားတက်ရောက်ရန်မတတျနိုငျများမှာအမှု၌ငါပုံမှန်ပြပွဲ၏ပျေါလှငျအချို့ကိုတင်ပြချင်တယ်။
အသေးစိတ်-oriented အဘို့, မြောက်မြားစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများနှင့်နည်းပညာ-အာရုံစူးစိုက်ပြပွဲခန်းမရှိပါတယ်။ အဆိုပါပြပွဲခန်းမတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကြိုဆိုဧည့်ခံပြီးနောက်, High-profile ကိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Keynote နေ့လယ်စာစားပွဲ, ထိုဂုဏ်သတင်းဂုဏ်ထူး & ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို & ညစာစားပွဲရှိပါတယ် ဆဲ ထိပ်တန်းစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ networking ပေးတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းများ။ ခင်းကျင်းပြသသောစိတ်ကူးထုတ်ကုန်များနှင့်စပွန်ဆာထိပ်ကျော်ကဤဖြစ်ရပ်များသယ်ဆောင်!
လူအားလုံးတို့သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများတဲ့အတွက်ကိုယ်စားပြုနေကြသည် SMPTE Show ကိုရဲ့အံ့သြဖွယ်ပြပွဲခန်းမ။ ဒါဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့တစ်ဦးချင်းစီပြသသည်လွန်ခဲ့သောထက် သာ. ကောင်း၏။ တစ်ခုချင်းစီပြသများကဲ့သို့မိုးသည်းထန်စွာ hitters သယ်ဆောင်: Aja, Blackmagic, မြက်ချိုင့်, Adobe ကနှင့် Telestream ယင်း၏အံ့မခန်းဖိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူအားလုံးရှိတယ်, နဲ့သင်တန်း Signiant ၏များမှာ!
အဆိုပါ SMPTE နည်းပညာဆိုင်ရာ Conferences ကများသောအားဖြင့် Verizon က, Technicolor, ကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များထံမှတင်ပြချက်များရှိ Sony က ရုပ်ပုံများ Entertainment က, Sony က အီလက်ထရောနစ်, Skywalker အသံ, Snell, Qualcomm မှ, က Motorola Mobility, NVIDIA, NHK, Microsoft, IBM က, HBO, Harris က, သဟဇာတ, Fujifilm, Ericsson က, Dolby LaboratoriesCisco ကုမ္ပဏီက, Beldenနှင့်ဘီဘီစီ။
SMPTE'' s ကိုဥပမာ, ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်သက်သက်မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောယင်း၏ပြပွဲမှကန့်သတ်မရှိကြပေ။ ဒါဟာအစကို select လုပ်ပါဒေသများမှာတစ်ရက်နည်းပညာဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏နံပါတ်အိမ်ရှင်အဖြစ်။ ဤရွေ့ကားလူကြိုက်များအစည်းအဝေးများလယ်ပြင်၌ရှိသောခေါင်းဆောင်များကဆုံးမသွန်သင်နေတဲ့အာရုံစိုက် session တစ်ခုမှတဆင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်နည်းပညာတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့တက်ရောက်လာရန်အလွန်အရေးပါအသိပညာဖြစ်စေဝေငှ။
48, 60 နှင့် 120 frames များကိုမြင့်မားသည် frame နှုန်း / စက္ကန့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏ဟူသောဂတိတော်သည်နှင့် 2012 ပြရန်၏ဗဟိုအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်, ဥပမာ, များစွာသောနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာညီလာခံအများအပြားတန်းဂျင့်များအပေါ်ကိုချွတ်မယ်နှင့်တကွ, စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားထင်ရှားတဲ့အချက်များကိုဖုံးလွှမ်း။ ဥပမာ, 2012 ထဲမှာ, ညီလာခံထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောခရစ္စတိုဖာ J ကို Lennon (Harris ကကော်ပိုရေးရှင်း, အမေရိကန်နိုင်ငံ), Harold Geller (AD-Id, အမေရိကန်နိုင်ငံ), မှ Ian Hamilton က (အဖြစ်လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူ "File-အခြေပြု Workflows လျှောက်ထား" အဖြစ်ခေါင်းစဉ်အကြောင်းကိုခဲ့ကြသည် Signiant, Inc, ကနေဒါ) & တိုနီဗကျစီလီ (Signiant, ကနေဒါ), နှင့် "ရီးရဲလ်အချိန် Workflows" သောမတ်စ်စစ်မှန်သော (NVIDIA ကော်ပိုရေးရှင်း, အမေရိကန်နိုင်ငံ) & အင်ဒရူးစာမျက်နှာ (NVIDIA ကော်ပိုရေးရှင်း, အမေရိကန်နိုင်ငံ) နှင့် Heiko Sparenberg (Fraunhofer များ၏အကြိုက် featuring IIS, ဂျာမနီ) & Siegfried Foessel (Fraunhofer IIS, ဂျာမနီ) ။
ပြီးခဲ့သည့်ကိုးဆယ်ခုနစ်နှစ်ရှိသော်အဘို့, SMPTE အဆိုကိုပုံရိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများအတွက်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်ဖြစ်, နှင့်ယခုလန်းလာသောကမ္ဘာကြီးဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာများအတွက်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ facilitated သိရသည်။ ဒါဟာဒီကြေငြာခဲ့သည် ၏နောက်လှည့်လည်ကြောင်းနိုဝင်ဘာ SMPTE ခေါင်းဆောင်မှုဇန်နဝါရီလ 1, 2014 အပေါ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားရဲရင့်အမြော်အမြင်ထို့နောက်သောတောက်ပသောမီးရှူးဆောင်ရွက်မည် SMPTE ရှေ့ဆက်, စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ထူးချွန်များ၏အမွေဆက်။ အရာရှိများတစ်ဦး2နှစ်သက်တမ်းနှင့်ဒေသတွင်းဝန်တစ်ဦးတည်းနှစ်သက်တမ်းရှိသည်။ ဒီဟာအဲဒီအအဖှဲ့အစညျး၏ပဲ့မှာနေရာ Slanted နေသောခေါင်းစဉ်: အလန် Lambshead အင်ဂျင်နီယာမှာ (ကဒုတိယသမ္မတ Evertz စံချိန်စံညွှန်းဒုတိယသမ္မတအဖြစ်လီမိတက် Technologies က); မဿဲ Goldman မှာတီဗီချုံ့နည်းပညာ (အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ Ericsson က) ဘဏ္ဍာရေးဒုတိယသမ္မတအဖြစ်; အသင်းဝင်ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်နှင့်ပေါလု Stechly (အသုံးချအီလက်ထရောနစ်မှာသမ်မတ) ။
ကိုးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအတွက်အစေခံရန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြ SMPTE ကမ္ဘာတဝှမ်းနှင့်ဤအရေးအသား၏အဖြစ်ရေးသားချက်များနေသောခေါင်းစဉ်: KL Lam အာရှ-သြစတြေးလျတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် (2011 thru ဟောင်ကောင် Cable ကို TV ကမှာအသံလွှင့်ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဟောင်းဒုတိယသမ္မတ); နှင့်ယောဟန်ဖိလိပ္ပု Maizels (Entropy Enterprises နှင့် Productions မှာအတိုင်ပင်ခံ), ထိုဒေသ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်; ဥရောပများအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး / အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ / အာဖရိက / နှင့်ဗဟို & တောင်အမေရိကအဖြစ်ရစ်ချတ်ဝလေ (Sundog မီဒီယာ Toolkit ကို၏ CEO) ။
ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်ဝန်ရာထူးအသစ်သူများသည်နေသောခေါင်းစဉ်: Randy Conrod (ကနေဒါတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် Harris ကထုတ်လွှင့်မှာဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကုန်ပစ္စည်း Manager ကို); အရှေ့ဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ကားလ်သည်ယောသပ် Kuhn (Tektronix မှာအကြီးတန်း Applications ကိုအင်ဂျင်နီယာ); တစ်ဦးက New York မြို့တိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ယောဟနျသ Ferder (စတူဒီယို၏ဒါရိုက်တာနှင့်ဖြစ်သော CBS မှာ Post-ထုတ်လုပ်မှုအင်ဂျင်နီယာ); ဒန်ဘားနက်မှာအရောင်း၏ (အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ Ericsson က တစ်တောင်ပိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြား); အနောက်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်မာ့ခ် Narveson (ပက် & Sheridan မှာမူပိုင်ခွင့်ရှေ့နေချုပ်); နှင့်ပေါလု R. ချပ်မန်း (FotoKem စက်မှုလုပ်ငန်း, Inc မှမှာနည်းပညာအကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ) ကိုတစ်ဦးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆက်လက်တည်ရှိဦးမည် ဟောလိဝုဒ် ဒေသ။
နှစ်ပတ်လည်မှာ SMPTE Show ကိုတစ်ရမ်းပြီးအောင်မြင်မှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်တစ်နှစ်အကြာတွင်သူတို့အရင်ကထက် wow ပိုပြီးအတူတက်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုအံ့ဘွယ်သောအမှု - ဒါပေမယ့်သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အခါတိုင်းပြုပါ! ဖြစ် SMPTE နည်းပညာအတူတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းမှာပဲသူမတူနိုင်တဲ့ or အဆိုပါနည်းပညာများကိုအတူတက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်ဘူး SMPTE?!
၏ထင်ရှားသောနှင့်တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ SMPTE IBC ရှိုးများနှင့်အံ့သြဖွယ် SMPTE အစဉ်အမြဲတိုးတက်မှု၏စံချိန်ကိုသူတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်တိုင်းရှိုးလုံးဝရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်အချို့ပါ! ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာဘို့ SMPTE သတင်းများ, blogged-In နေဖို့!
SMPTE အကြောင်း audio သဘောတူညီချက် ပြသ SMPTE Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က ဗီဒီယို 2013-03-10
နောက်တစ်ခု: တစ်ဦး MPEG Analyzer @tektronix နှင့်အတူရုပ်မြင်သံကြားအဘို့အ RF စောင့်ကြည့်